Ethereum Classic (ETC) In Oo shilin Soomaali (SOS) Heerka Sarrifka
Ethereum Classic In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta. Qalabka lacagta lacagta lagu beddelanayo - qiimaha maanta ee sicirka lacagta ee adduunka oo dhan.
Ethereum Classic In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta
Qiimaha Ethereum Classic gudaha Oo shilin Soomaali maanta, heerka sarrifka dhabta ah. Warbixin ku saabsan qiimaha Ethereum Classic to Oo shilin Soomaali ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Sicirka sarrifka ee lagu muujiyey boggan waa sarrifka lacagaha si rasmi ah loo aasaasay maanta 19 January 2020 iyadoo loo eegayo natiijooyinka ganacsiga sarrifka. Heerka sarrifka ee Ethereum Classic to Oo shilin Soomaali) waa aasaaska suuqyada crypto iyo sarrifka ay hadda ku jiraan.
Heerka sarrifka Ethereum Classic gudaha Oo shilin Soomaali sida laga soo xigtay suuqa sarrifka lacagta suuqyada 19/01/2020.
1 Ethereum Classic wuxuu hadda la mid yahay 4 866.25 Oo shilin Soomaali. Suuqa sarrifka rasmiga ah ee suuqa crypto. 1 Ethereum Classic wuxuu ku dhacay -539.120985 Oo shilin Soomaali maanta suuqa ugu weyn crypto. Ethereum Classic sicirka sarrifka ayaa hoos u dhacay maanta marka loo eego Oo shilin Soomaali marka loo eego sicirka sarrifka lacagaha 'lacagta digital Yurub'. Maanta, 1 Ethereum Classic kharashyada 4 866.25 Oo shilin Soomaali suuq yurub Yurub.
Ethereum Classic In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka maanta 19 January 2020
Sidee heerka sarrifka Ethereum Classic to Oo shilin Soomaali dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa lagu arki karaa tusaalaheenna keydka ku yaal shaxda. Ethereum Classic qiimayaasha sarrifka ee maalmo dhawr ah laga soo horjeedo Oo shilin Soomaali lacagta digital waxaa lagu bixiyay jadwalka ku yaal boggan bogga websaydhka loo yaqaan 'cryptoratesxe.com Waa muhiim in la arko ma aha oo kaliya sicirka sarrifka ee maanta, laakiin sidoo kale sicirrada shalay iyo maalintii ka hor. Sicirka sarrifka Ethereum Classic to Oo shilin Soomaali berrito waxay kuxirantahay isbeddelka heerka sarrifka maalmihii dhowaa.
19/01/2020 4 866.246 -539.120985 ↓
18/01/2020 5 405.367 579.946036 ↑
17/01/2020 4 825.421 501.601368 ↑
16/01/2020 4 323.819 -15.426024 ↓
15/01/2020 4 339.245 1 071.953 ↑
Beddelaan Ethereum Classic In Oo shilin Soomaali
Ethereum Classic (ETC) In Oo shilin Soomaali (SOS) qiimaha sicirka
Ethereum Classic (ETC) In Oo shilin Soomaali (SOS) shaxda qiimaha taariikhda
1 Ethereum Classic hadda waa mudan yihiin 4 866.25 Oo shilin Soomaali. 5 Ethereum Classic sicirka sarrifka ayaa la eg 24 331.23 Oo shilin Soomaali. 48 662.46 Oo shilin Soomaali qiimaha 10 Ethereum Classic sicirka sarrifka hadda. Qiimaha 25 Ethereum Classic sicirka sarrifka waa 121 656.14 Oo shilin Soomaali. 1 Ethereum Classic maanta waa 4 Oo shilin Soomaali marka loo eego sicirka sarrifka ee suuqa crypto. 1 Ethereum Classic waxaa ku dhacay -539.120985 Oo shilin Soomaali maanta marka loo eego sicirka sarrifka ee suuqa ugu weyn ee wadanka.
4 866.25 SOS 24 331.23 SOS 48 662.46 SOS 121 656.14 SOS 243 312.29 SOS 486 624.58 SOS 1 216 561.44 SOS 2 433 122.88 SOS
Qiimaha 10 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka waa 2.05 Ethereum Classic. Marka loo eego 50 000 SOS waxaad ubaahantahay inaad bixiso 10.27 Ethereum Classic . 20.55 Ethereum Classic, qiimaha 100 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta. 51.37 Ethereum Classic maanta waa qaali 250 000 SOS sicirka sarrifka. Ethereum Classic sarrifka lacagaha ayaa maanta hoos u dhacaya Oo shilin Soomaali. Qiimaha 1 Ethereum Classic maanta waa 4 Oo shilin Soomaali, sida suuqii crypto ee wadanku aasaasay.
10 000 SOS 50 000 SOS 100 000 SOS 250 000 SOS 500 000 SOS 1 000 000 SOS 2 500 000 SOS 5 000 000 SOS
2.05 ETC 10.27 ETC 20.55 ETC 51.37 ETC 102.75 ETC 205.50 ETC 513.74 ETC 1 027.49 ETC